ကြားမိသမျှ ပညာရေးလောက | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ကြားမိသမျှ ပညာရေးလောက
Posted by mgwalone on Feb 9, 2013 in Opinions & Discussion |4comments
မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး အဆင့်အတန်း တိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတာ ကြားနေရတော့ ကြာပါပြီ။ ယခင်အစိုးရလက်ထက်ကတော့ ဆောက်လိုက်တဲ့ ကျောင်းတွေ၊ တက္ကသိုလ်တွေ၊ ဘွဲ့ရတွေလဲ ပေါ မှပေါပါပဲ။ ဒါပေမဲ့..ဒါပေမဲ့ ပေါ့ခင်ဗျာ…
အမှား၊ အမှန် (True/False) ဖြေရမဲ့ မေးခွန်းအတွက် အဖြေကို အလွတ်ကျက်ပြီး ဖြေကြပါသတဲ့။ ဇီဝဗေဒကို သီချင်းလုပ်ရေးပြီး ကျက်ကြသတဲ့။ ဆရာသင်တာက (၅) ပုဒ်၊ စာမေးပွဲအတွက် ၃ ပုဒ်ဘဲကျက်။ ကျုရှင်သွားတက်။ ခုံနံပါတ်ပေး၊ လက်ဆောင်လေးနဲ့ သွားကန်တော့။ ပြောရရင်အများကြီးဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်လို and so on and on and on လို့ပဲ ပြောလိုက်ပါရစေ…
သူငယ်တန်းကစလို့ တက္ကသိုလ်အထိ၊ ဒေါက်တာဘွဲ့ ယူသူများအထိ အမျိုးစုံ ဖြစ်နေတာတွေက အများပါပဲ။ သတိရလို့ တစ်ခုတော့ ပြောဦးမယ်ဗျာ။ မဟာဝိဇ္ဇာ ကျမ်းပြု ယင်းနဲ့ တက္ကသိုလ်မှာ နည်းပြ ပြန်လုပ်နေသူ တစ်ယောက် တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်ကို ဘယ်လို အသုံးချရမှန်း။ စာအုပ်ကို ဘယ်လို ရှာရမှန်း မသိတာ ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်။ ထားပါတော့….
အဲ အခုတော့ ပြောင်းနေပါပြီတဲ့။ ကြားရတာလေး ဖေါက်သည်ချဦးမယ်။
တက္ကသိုလ်မှာ စာသင်ခန်းတွေကို လူ ၈၀ ပဲ ထားရမတဲ့။ သင်ကြားမှု ထိရောက်အောင်တဲ့။ ကောင်းပါတယ်။ အဲ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ သင်မဲ့ ဆရာ မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ ဒီအတန်းတွေကို တာဝန်ချထားပေးရတာက သက်ဆိုင်ရာ ဌာနမှူး ပါမောက္ခများပါ။ မလောက်တော့ ဘယ်လိုလုပ်သလဲ ။ သူတို့ပြောတာက အခြင်းခြင်း အဆင်ပြေအောင် လုပ်ကြပေါ့တဲ့။
အထက်ကို ပြန်တင်မပြတော့ဘူးလား။ ကျွန်တော်တို့၊ ကျွန်မတို့ ဆရာအင်အား မလုံလောက်ပါဘူးလို့ ပြန်လည် တင်ပြတာ မရှိတော့ဘူးလား။
လစာကလဲ မလောက်မငှ။ ဒီတော့ အားလုံး ကျူရှင်ပြ။ ဦးဆောင်တာက ပါမောက္ခ။ ကျောင်းသားကလဲ ကျူရှင်တက်ရင် စာမေးပွဲအောင်မှာပါ။ အချိန်တန်ရင် ဘွဲ့ ရမှာပါ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ။ အများစုကို ပြောတာပါ။ တကယ်စေတနာမှန်တဲ့ဆရာတွေရှိသလို တကယ် ကြိုးစားတဲ့ ကျောင်းသားတွေလဲ ရှိပါတယ်။
ကျူရှင်ပြလိုသူ ဆရာ၊ ဆရာမများနဲ့ အားကိုးသူ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အဆင်ပြေနေဆဲပါပဲ။
တိုင်းပြည်အနာဂတ်။ ယနေ့လူငယ် နောင်ဝယ်လူကြီး ဆိုတာတွေ ……………….
“ငါ တကယ် တတ်တယ်” …..
ဆိုပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ လက်မ ထောင်နိုင်တဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ မွေးထုတ်ပေးနိုင်မယ့် ပညာရေးမျိုးကို မျှော်လင့်နေမိပါတယ် ….
ဆရာ/မ အင်အားမလုံလောက်တာကတော့ လွယ်ပါတယ်
ထူထူထည်းထည်း ငွေလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေ ဆရာလုပ်ချင်ရင် ခန့်ပေးလိုက်ပေါ့။
ကျုပ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးကို နှစ်သက်လွန်းလို့ ဆယ်တန်းတောင် မဖြေဘူးဗျ။
ဒါတောင် အသိနောက်ကျသွားလို့။ အဲ့ဒီလို ကျောင်းမတက်တော့ပဲ အပြင်က သင်တန်းလေး
ဘာလေးလျှောက်တက်ခဲ့လို့ ယခုလို ကွန်ပျူတာလေးဘာလေး နည်းနည်းပါးပါး ကိုင်တတ်ပြုတတ်
နေဗာဒယ်။ ဘွက်ရထားဒဲ့ လူဒွေဗာဒွေ ၉၀% လောက်က ကာဂူလိတ်တာတောင် ကောင်းကောင်း
တကသိုလ်တက်ရင် စာတတ်တယ်ဆိုတာတော့မှန်ပါတယ် ကိုမာရဇ္ဇကတောင် သိချင်းဆိုထားသေးတာပဲ
ပညာရေးစနစ်ကြီးကို ပြင်မှ အနာဂတ်နိုင်ငံ တိုးတက်မှာပါ…ပညာရေးဘက်မှာ များများပိုသုံးသင့်ပါတယ်…
တကယ်တော်တဲ့သူတွေကို ပညာလက်ဆင့်ကမ်းတဲ့ ဆရာတွေလုပ်ချင်လာအောင် ဖူလုံတဲ့လစာတစ်ခု ပေးသင့်ပါတယ်… ရှိပြီးသားဆရာတွေကိုလည်း စနစ်တကျ မွမ်းမံပေးရမယ်… တကယ်တော်တဲ့သူကို တကယ်နေရာပေးတဲ့ ဘက်မလိုက်စနစ်ကိုလည်း ကျင့်သုံးရမယ်….
ကလေးတွေကိုလည်း စိတ်ဓာတ်ကောင်းနဲ့ ကြီးပြင်းလာအောင် သင်ရိုးတွေကို စနစ်တကျ ရေးဆွဲရပါမယ်.. စာသင်ချိန်ရယ်၊ သင်ခန်းစာရယ်၊ ပေးချင်တဲ့အသိရယ် မျှတအောင် ရေးရပါမယ်…
မိဘတွေအနေနဲ့လည်း အဆင့်ရရေးကို အဓိကမထားဘဲ အခြေခံကောင်းကောင်းနဲ့ ရှေ့ဆက်ဖို့ကို ဦးစားပေးရပါမယ်.. စာပြီးစာ နဲ့ ကလေးတွေကို အချိန်ကုန်မခံခိုင်းဘဲ တွေးတတ်၊ ခေါ်တတ်၊ ၀ါသနာပါရာကို လေ့လာတတ်အောင် အခွင့်အရေးပေးရပါမယ်…
(တွေးမိတာတွေ ရေးထားပါတယ်… )
နောက်ပိုင်းတော့ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွေရဲ့ ခေတ် ရောက်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
အစိုးရကျောင်းထား ဆရာ ဆရာမ ဘောချက်စရိတ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းထားစရိတ် သိပ်မကွာတော့မယ်လေ။
ဆရာ ဆရာမ တွေ ဘောချက်တာလည်း အပြစ်မဆိုပါဘူး အစိုးရလစာက မလောက်မဌ ဘဲရတာမို့လေ။